Daawo-Barcelona oo saddex dhibcood oo dahabi ah ka soo qaadatay Atletico Madrid. – Puntland News
Home 2017 February 26 Sports Daawo-Barcelona oo saddex dhibcood oo dahabi ah ka soo qaadatay Atletico Madrid.
Barcelona ayaa kooxa Atletico Madrid ka soo gaadhay guul dahabi ah waxayna kulankeedii ugu danbeeyay La Ligaha ee Vincente Celderon ku soo xidhatay guul ka caawin karta in ay xili ciyaareedkii saddexaad oo xidhiidh ah ku guulaysato koobka La Ligaha.
Barcelona oo xaalad adag ku jirtay ayaa awooday in ay dhibaatadii haysatay dhinac iskaga dhigto isla markaana ay Atletico Madrid ka soo tirsato saddexda dhibcood ee ay dhibaatada adag kala soodhex baxday.
Lionel Messi ayaa markale kooxdiisa Barcelona badbaadiyay wuxuuna dhamaadkii kulankan dhaliyay goolka ay Balaugrana ku soo heshay saddex dhibcood oo qiimo ahaan udhigma lix dhibcood. Barcelona ayaa si ku meel gaadh ah u qabtay hogaanka La Ligaha waxayna markeeda daawan doontaa Villarreal iyo Real Madrid waxa kala qabsan doona. Atletico Madrid ayaa si wayn uga murugoon doonta fursado badan oo ay qaybtii hore ee kulankan iska lumiyeen waxaana door wayn kulankan ku lahaa Ter Stegen oo A. Madrid laf dhuun gashay ku noqday.